Web Developer ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို. ဘာတွေသိထားဖို.လိုလဲ (Magway,Pyay Barcamp Topic)
Web Development ကို စလုပ်တော့မယ်ဆိုရင် ကျနော်တို. Development လုပ်ဖို. အသင့်တော်ဆုံး Os တစ်ခုသုံးဖို. လိုပါတယ်။ ကျနော်ကတော့ Linux Os ကိုသုံးဖို. Recommend ပေးပါတယ် ၊ linux က Opensource တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ် ၊ ကျနော်ကတော့ Opensource Platform တွေသုံးရတာ နှစ်သက်ပါတယ်၊ Opensource တွေသုံးပြီး ကိုယ့် projects တွေရေးရတာပိုစိတ်သန့်လို့ပါ။ နောက်တစ်ချက်က vps server တွေတော်တော်များများက linux server တွေဖြစ်တဲ့အတွက် linux ကိုသာကျနော်တို့ သုံးမယ်ဆိုရင် server မှာသုံးတဲ့ command တွေနဲ့လည်း အသားကျပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ ကျနော်တို. development နဲ့ လိုအပ်တဲ့ software တွေထည့်တဲ့အခါမှာလည်း command တစ်ကြောင်းရိုက်ပြီး install လုပ်ရုံပါပဲ ၊ ဒါပေမယ့် internet connection တော့လိုအပ်ပါတယ်၊ နောက်ပြီး လိုအပ်ရင် လိုအပ်သလို update တို့ ၊ upgrade တို.လုပ်ပေးရတဲ့အခါတွေလည်းရှိပါတယ်၊ web development လုပ်မှတော့ internet connection အမြဲလိုနေတာ မဆန်းပါဘူး၊ linux မှာ မရတာနောက်တစ်ခုက Game ကစားလို့အဆင်မပြေတာပါ၊ နောက်ပြီးတော့ linux မှာ photoshop လို Gimp ဆိုတဲ့ software ရှိပေမယ့် window က PhotoShop လောက် အဆင်မပြေပါဘူး။ Development လုပ်ဖို့အတွက်တော့ ကောင်းကောင်းအသုံးချလို့ရပါတယ်။ linux ကိုသုံးပြီး projects တွေရေးတဲ့အခါမှာ နောက်ထပ် စိတ်မညစ်ရတာ တစ်ခုက virus အန္တရာယ် မကြုံရတော့တာပါ၊ ကျနော်သုံးလာတဲ့တစ်လျှောက်တော့ virus ကိုက်လို.ကျနော့ project file တွေပျက်တာတို့၊ ကမောက်ကမ ဖြစ်တာတို. မကြုံဖူးပါဘူး။ ဒါကြောင့်မို. web development လုပ်တော့မယ်ဆိုရင် linux ကိုသုံးဖို. recommend ပေးပါတယ်။
နောက်ထပ် သိထားရမယ့်အရာကတော့ Version Control လို.ခေါ်တဲ့ Git အကြောင်းပါ၊ Git website တွေဖြစ်တဲ့ GitHub တို. Bitbucket တို.မှာ Account တစ်ခုလုပ်၊ Repository တစ်ခုဆောက်ပြီး ကျနော်တို. projects တွေ backup အနေနဲ့ တင်ထားလို.ရပါတယ်၊ GitHub ကတော့ public အနေနဲ့တင်မယ်ဆိုရင်တော့ free တင်လို့ရပါတယ်၊ private အနေနဲ့တင်မယ်ဆိုရင်တော့ တစ်လကို 7$ ပေးရပါတယ်၊ BitBucket ကတော့ private အနေနဲ့ free တင်လို.ရပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ လူ ၇ ယောက်ထက်ပိုပြီးတော့ထည့်လို့မရပါဘူး၊ ပိုထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ပိုက်ဆံပေးရပါတယ်၊ ကိုအဆင်ပြေတဲ့ဟာကိုရွေးသုံးလို.ရပါတယ်၊ ကျနော်တို.စက်တွေ မတော်တဆ ပျက်သွားတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ ကျနော်တို.ရေးလိုက်တဲ့ code အမှားကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် run လို.မရတော့တဲ့အခါမျိုးဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာ ကျနော်တို.နောက်ဆုံးတင်ထားတဲ့ checkout key အတိုင်းပြန်ခေါ်ပြီး ပြဿနာတွေမဖြစ်ခင်ကအခြအနေကို ပြန်ခေါ်လို.ရပါတယ် ၊ ဒါကတော့ Git သုံးလို.ရတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုပါ။ Git ကို နောက်ထပ် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အဖွဲ့လိုက် project ရေးတဲ့အခါမျိုးမှာ ကောင်းကောင်းအသုံးချလို.ရပါတယ်၊ ကိုယ်ရေးတဲ့ module တွေကို ဆောက်ထားတဲ့ repository ထဲတင်ပေးရုံပါပဲ ၊ တခြားရေးတဲ့ဘက်ကနေ git pull ဆိုပြီး download ဆွဲလိုက်တာနဲ့ အကုန်လုံး သူ့ folder နဲ့သူ့နေရာနဲ့သူရောက်သွားမှာပါ၊ အကုန် သူ့ဖာသူ ပေါင်းပေးပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက် တန်ပြီး run ရုံပါပဲ။ ဥပမာ ကိုယ့် project ကို git ထဲစထည့်ချင်တယ်ဆိုရင် “git init” ဆိုပြီးရိုက်ရပါတယ်၊ အဲ့လိုရေးလိုက်တာနဲ့ project folder ထဲမှာ .git ဆိုတဲ့ folder လေးဆောက်သွားပါတယ် ၊ ကိုယ်ရေးတဲ့ file တွေကို ထည့်တော့မယ်ဆိုရင်တော့ “git add .” လို.ရိုက်ပြီး ထည့်လို့ရပါတယ်၊ ကိုယ်ဘာတွေထပ်ပြင်ထားလဲဆိုတာကြည့်ချင်ရင်လည်း “git status ” လို.ရိုက်ပြီးကြည့်လို့ရပါတယ်။ အကုန်သေချာပြီ တင်လို့ရပြီဆိုရင်တော့ “git commt-m ‘ — -’” ဆိုၿပီး commit ေပးၿပီး “git-push -u origin master” ဆိုပြီး တင်လိုက်ရုံပါပဲ။ Git command တွေကို စမ်းကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ https://try.github.io/ မှာ တစ်ဆင့်ချင်းစမ်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။ Git က web development မှာမှ မဟုတ်ပါဘူး။ တခြား Mobile ၊ Desktop application development တွေမှာလည်းသုံးလို.ရပါတယ်။
နောက်တစ်ချက်ကတော့ ကိုယ် code ရေးတဲ့ Editor တို. studio တို. ပါပဲ၊ ကျနော်ကတော့ website ဘက်က projects တွေရေးရင် Sublime Text Editor ကိုသုံးပါတယ်၊ sublime က သုံးရတာ lightweight ဖြစ်လို.ပါ၊ code ရေးရတာအဆင်ပြေအောင် ကိုယ်ထပ်ထည့်ချင်တဲ့ package တွေလည်းထပ်ထည့်လို့ရပါတယ်၊ ကိုယ်ဘာကို သွားပြင်လို့လည်းရပါတယ်၊ နောက်ထပ်သဘောကျနဲ့ editor တစ်ခုကတော့ Visual Code Studio ပါ၊ သူကတော့ Microsoft ကနေ မကြာသေးခင်ကမှ opensource ပေးထားတဲ့ code editor တစ်ခုပါ၊ နောက်တစ်ခု သုံးဖြစ်တာကတော့ PhpStorm ပါ၊ သူကတော့ studio အဆင့်ပါ၊ သူကတော့ စက်နည်းနည်းလေးပါတယ်၊ code ရေးရတာလည်း တော်တော် အဆင်ပြေပါတယ်။ (ကျနော်ဆိုရင် Android app ရောရေးတာဖြစ်လို. AndroidStudio လည်းသုံးရပါတယ်၊ PhpStorm ပါသုံးရင် စက်က တော်တော်လေးသွားပါတယ်၊ ဒါကြောင့်မို့ နှစ်ခုပြိုင် run ရင်အဆင်မပြေလို့ Sublime ပဲသုံးဖြစ်တာပါ၊ ) ။ ကိုယ်နဲ့ code ရေးရတာ အဆင်ပြေမဲ့ ဟာကိုသုံးပြီးရေးလို့ရပါတယ်။
နောက်ထပ်သိရမှာကတော့ User Request နဲ့ Response life cycle ပါ၊ user တွေက GET, POST, PUT ,PATCH, Delete ဆိုတဲ့ Method တွေနဲ့ Request ပေါင်းစုံပို.နိုင်ပါတယ်၊ ဥပမာ — techx.com.mm/news ဆိုပြီး “news” ကို request လုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင် server ကနေ news နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ data တွေကို response ပြန်ပြခိုင်းရပါမယ်၊ http://techx.com.mm/latest ဆိုရင်လည်း “latest” နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ data တွေကို response ပြရပါလိမ့်မယ်၊ အဲ့လို URL bar ကနေ request လုပ်သမျှကို GET Request လို့ခေါ်ပါတယ်၊ နောက်တစ်ခုကတော့ POST Method ပါ၊ သူကတော့ URL bar မှာမမြင်ရပါဘူး၊ တစ်ချို့ နေရာ တွေမှာ security အရ POST Method သုံးကိုသုံးရမယ့်အခါမျိုးတွေရှိပါတယ်၊ PUT,PATCH Method တွေကို ပြန်ပြင်ချင်တဲ့အခါမျိုးတွေ၊ data အသစ်ထပ်ထည့်ချင်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာသုံးရပါတယ်၊ DELETE Method ကတော့ data တွေဖျက်ပစ်ချင်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာသုံးရပါတယ်။
Development လုပ်တဲ့အခါမှာ ကြားထဲမှာ သိထားသင့်တဲ့ဟာတစ်ခုကတော့ Content Management System လို့ခေါ်တဲ့ CMS အကြောင်းပါ၊ ဥပမာ — WordPress , Drupal … Etc …. တို့ပေါ့၊ CMS တွေရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ Website တွေကို အလွယ်တစ်ကူ ၊ အမြန်ဆုံးဖန်တီးလို့ရဖို့ပေါ့၊ Code မရေးတတ်တဲ့လူတွေလည်း Website ဖန်တီးလို့ရအောင်ပေါ့၊ အဲလို အလွယ်တကူ လုပ်လို့ရပေမဲ့ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် control လုပ်ဖို့အတွက်အဆင်မပြေပါဘူး၊ သူပေးထားတဲ့ ဘောင်ထဲမှာပဲ လုပ်လို.ရမှာပါ၊ နောက်ပြီးတော့ သတင်း site တစ်ခုက CMS ကိုသုံးပြီးရေးမယ်ဆိုရင် အစပိုင်းမှာသုံးလို့အဆင်ပြေပမယ့် data တွေ၊ traffic တွေများလာတာနဲ့အမျှ သုံးမရလောက်အောင် လေးလာပါလိမ့်မယ်၊ CMS ဆိုတာကလည်း လူအများကြီးသုံးဖို့ရည်ရွယ်ပြီးလုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် ကြာလာတာနဲ့အမျှ အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်လာတာမဆန်းပါဘူး၊ ကိုယ်က project အကြီးကြီး ရေးချင်တာဆိုရင်တော့ CMS ကို မသုံးသင့်ပါဘူး၊ CMS ကို personal blog page လောက်မှာပဲ သုံးသင့်တယ်လို့ ကျနော်ယူဆပါတယ်၊ “ဘူးပေါက်တာမလိုချင်ဘူး၊ ရေပါတာပဲလိုချင်တယ်” ဆိုတဲ့စကားက ဒီနေရာမှာမှားပါတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ CMS နဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ လုပ်ငန်း project ကြီးကို run နေတာဟာ ဘူးပေါက်ကြီးနဲ့ ရေခပ်နေရသလိုပါပဲ၊ CMS တွေကိုလည်း PHP ကိုပဲ သုံးပြီး ရေးထားတာပါ။ ကိုယ်က project ကြီးကြီးမားမားရေးမယ်ဆိုရင်တော့ PHP ကို ကောင်းကောင်းရေးတတ်ပြီး Framework Level အထိလေ့လာသင့်ပါတယ်။
Framework တွေမှာ လက်ရှိ ကျနော်အသုံးပြုနေတာက Laravel Framework ပါ၊ Laravel ကိုလည်း php နဲ့ ရေးထားတာပါပဲ ၊ ဘယ်လို project မျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်ဖန်တီးလို့ရပါတယ်၊ Security လည်း စိတ်ကြိုက်လုပ်လို့ရပါတယ်၊ Frameworks တွေကို ဘာကြောင့်သုံးလဲဆိုတော့ code ရေးရတာ ပိုမြန်လို့၊ ပို စနစ်ကျလို့၊ security လည်းပိုကောင်းလို့ ၊ ဖန်တီးလို့ရတဲ့ ဘောင်ကျယ်လို့ သုံးရတာပါ။ လက်ရှိမှာ pure php နဲ့ project ရေးတယ်ဆိုတာ ကျောင်းသား project တွေလောက်ပဲရှိပါတော့တယ်၊ တကယ် run တဲ့ projects တော်တော်များများက frameworks တွေပဲသုံးပြီးရေးကြတာပါ၊ တခြား Symphony, CodeIgniter , CakePhp, Zend Frameworks တွေလည်းလူသုံးများကြပါတယ်။ Laravel Framework ကို လေ့လာမယ်ဆိုရင်တော့ https://laracasts.com/ မှာ video tutorial တွေ ကြည့်ပြီးလေ့လာလို့ရပါတယ်၊ တစ်လကို 9$ ထည့်ထားရင် video တွေ download ဆွဲပြီးလေ့လာလို့ရပါတယ်၊ စလုပ်လုပ်ချင်းကနေ နောက်ဆုံး update ရေးတဲ့ code တွေအထိကြည့်လို.ရပါတယ်၊ Laravel Documentation မှာလည်းဖတ်ကြည့်လို့ရပါတယ်။
အခုမှစလုပ်မဲ့သူတွေအနေနဲ့ Framework level ကို တန်ပြီးမလေ့လာသင့်ပါဘူး၊ Framework ကိုတန်းလေ့လာမယ်ဆိုရင် သူရေးတဲ့ ပုံစံတွေကို နားလည်မှာမဟုတ်သေးပါဘူး။ လွယ်ကူတဲ့အပိုင်းမှာ ရတယ်ထင်ရပေမဲ့ ရှုပ်ထွေးတဲ့အပိုင်းတွေရေးရတဲ့ အခါမျိုးမှာ လုပ်နိုင်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူး၊ ဒါကြောင့်မို့ Framework ကိုမလေ့လာခင် php အခြေခံကိုလည်း ကောင်းကောင်းရေးတတ်အောင်လုပ်ရပါမယ်၊ အခြေခံတွေဖြစ်တဲ့ looping ပတ်တာ၊ condition စစ်တာ တွေကို နာလည်ရမယ်၊ project အသေးလေးတွေကိုလည်းစမ်းရေးကြည့်ရပါမယ်၊ ပြီးရင် Functional Concepts တွေ ၊ Oops Concepts တွေကောင်းကောင်းအသုံးချတတ်ရပါမယ်၊ အဓိကကတော့ Object Oriented Programmings လို့ခေါ်တဲ့ Oops Concepts ကိုကောင်းကောင်းသုံးတတ်ဖို့လိုပါတယ်၊ Oops ကောင်းကောင်းသုံးတတ်ရင် ပြသနာတွေဖြေရှင်းရတာ ပိုမြန်ပါတယ်၊ ပို smart ကျပါတယ်၊ ဒီလို concepts တွေသုံးပြီးတော့လည်း projects တွေများများရေးကြည့်သင့်ပါတယ်၊ နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ကတော့ Composer တွေယူသုံးတတ်တာပါ ၊ composer ဆိုတာကတော့ အသင့်ရေးပြီးသား package တွေကို ကိုယ့် project ထဲက လိုအပ်တဲ့ အပိုင်းတွေမှာ ထည့်သုံးတာပါ၊ တစ်ချို့နေရာတွေမှာ ကိုယ်ဖာကိုရေးနေတာထက် သူတို့ open soruce ပေးထားတာကို ယူသုံးတာက ပိုစိတ်ချရပါတယ်၊ https://getcomposer.org/ ကလမ်းညွှန်ချက်အတိုင်း စမ်းကြည့်လို့ရပါတယ်။ လိုအပ်ရင်လိုအပ်သလို packages တွေရှာသုံးတတ်လာပြီဆိုရင်တော့ ကျနော်တို့ တဖြည်းဖြစ်ကျွမ်းကျင်လာပါပြီ၊ web development နဲ့ အသားကျလာပါပြီ၊Laravel Framework ကိုသုံးတဲ့အခါမှာလည်း composer ကိုအမြဲသုံးရပါတယ်၊ ကျနော်တို့ နောက်တစ်ခု ထပ်သိရမှာက patterns တွေအကြောင်းပါ ဘယ် pattern ကို ဘယ်လိုပုံစံရေးတယ်၊ ဘယ်လိုပြန်ခေါ်သုံးရတယ်နားလည်ထားဖို့လိုပါတယ်၊ MVC patterns ဆိုတာဘယ်လို၊ Singalaton Patterns ကဘယ်လို၊ Factory ကဘယ်လို ၊ Repository Patterns ကို ဘယ်လို အသုံးချလို့ရတယ်ဆိုတာတွေနားလည်ထားမှ Laravel ကိုလေ့လေ့တဲ့အခါမှာ ပိုလွယ်ကူမှာပါ၊ ပိုခရီးရောက်မှာပါ။(တခြား patterns တွေလည်းအများကြီးရှိပါသေးတယ်)
ကျနော်တို. project ကို ပြီအောင်ရေးတတ်သွားပြီဆိုရင်တော့ website performance ကောင်းဖို.ကြိုးစားရပါမယ်၊ ကိုယ့် site ကို users တွေဝင်ကြည့်လို. လေးကန်နေရင် နောက်ထပ်ကြည့်ချင်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူး၊ ကိုယ့် site speed မြန်အောင် ၊ server အလုပ်လုပ်ရတာမများအောင် Caching system တွေကို အသုံးပြုတတ်ရပါမယ်၊ Cache ရိုက်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ file လေးတွေအနေနဲ့ ထွက်လာပါတယ်၊ Memory ပေါ်မှာ key-value စနစ်နဲ့ store လုပ်ထားပါတယ်၊ ဘယ်လောက်ကြာကြာ store လုပ်ထားမယ်၊ ဘယ်အချိန်မှာ ဖျက်ပစ်မယ်ဆိုတာတွေ သတ်မှတ်ပေးထားရပါတယ်၊ user က request လုပ်တိုင်း database မှာ သွားရှာမနေတော့တဲ့အတွက်ပိုမြန်သွားပါတယ်၊ ကျနော် လက်ရှိအသုံးပြုတာကတော့ redis cache ပါ ၊ သုံးလို့အဆင်ပြေအောင်လုပ်ထားတဲ့ package တစ်ခုလည်းရှိပါတယ်၊ https://github.com/rinvex/repositor... မှာ သွားကြည့်လို့ရပါတယ်၊ caching system ပိုင်းပြီတော့နောက်ထပ် သတိထားရမဲ့ အပိုင်းလေးတွေရှိပါသေးတယ်၊ Complex Redirect လုပ်တာတွေကို ရှောင်ရပါမယ်၊ request တစ်ကြိမ်ထဲမှာ URL တွေအများကြီးကို redirect လုပ်တာမျိုးပါ၊ ပြီးတော့ Bad Requests တွေကို ရှောင်ရပါမယ် ၊ Bad Request ဆိုတာ မရှိတဲ့ images တွေ link တွေကိုချိတ်ထားတာမျိုးတွေပါ၊ နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ css links တွေ java script links တွေကို minify လုပ်ပြီတော့ file size ကို optimize လုပ်ပစ်တာပါ၊ filename မှာ “filename.min.css” ,”filename.min.js” ဆိုပြီးပြောင်းပစ်တာပါ၊ Minify လုပ်တာက မလိုအပ်တဲ့ space တွေ၊ ပိုနေတာတွေကို ဖြုတ်ပြီး တစ်ကြောင်းတည်းဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တာပါ။
နောက်တစ်ခုက WebDeveloper တစ်ယောက်အနေနဲ့ Application Program Interface လို့ခေါ်တဲ့ API ကိုလည်း ကောင်းကောင်းထုတ်ပေးတတ်ရပါမယ်၊ API ထုတ်ပေးတယ်ဆိုတာက ကိုယ်ရေးတဲ့ site ကတင်တဲ့ data တွေကို တခြား Android Developer, IOS Developer တွေကယူသုံးလို့ရအောင် data ထုတ်ပေးတာပါ၊ Api ထုတ်ပေးတဲ့နေရာမှာ စနစ်တကျထုတ်ပေးတတ်ဖို့လိုပါတယ်၊ သတ်မှတ်ချက်တွေအတိုင်းထုတ်ပေးမှ ကိုယ်ရေးတဲ့ api ကို developer တိုင်းနားလည်မှာပါ၊ API နဲ့ပတ်သက်ပြီး လေ့လာချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Building Api You Won’t Hate ဆိုတဲ့ စာအုပ်ဝယ်ဖတ်ပြီး လေ့လာလို့ရပါတယ်။
Web Development ကိုလေ့လာမယ့် ညီ၊ညီမတွေအတွက် ဒီ Article အချက်အလက်လေးတွေက အကျိုးရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
Never missastory from KaungKhantLynn, when you sign up for Medium. Learn more
Never missastory from KaungKhantLynn